I-Infiniti SUV Model Lineup - Ii-Vehicle Utility Vehicles kunye neCrossovers
Infiniti yi-Nissan ye-luxury division, kodwa banokukhetha ukuba ucinge ngemoto nganye ye-Infiniti njengeyodwa kwaye ihluke kwi-Nissan cousins. Njengoko i-Infiniti SUV kunye ne-crossover lineup kuqhubekile ukuguquka, kulula ukuba kulula, nangona utshintsho olusandul Ngomnyaka womzekelo we-2014, i-Infiniti yaqamba kwakhona zonke ii-sedans zayo kunye neengqungquthela njenge-"Q", kunye nazo zonke ii-SUV kunye nee-crossovers njenge "QX".
I-Infiniti QX SUVs isahlulo ngasinye senkcazo yokubhaliweyo kunye nomnye we-Infiniti lineup. Baphinde babelane ngezinye iindawo kunye nezixhobo kunye neenqwelo zeNissan, kodwa bazisile bonke babo, ngokusebenza kunye nokunethezeka kwimphambili. I-SFV nganye ye-Infiniti iza newaranti enesiseko seminyaka engama-4 / 60,000-mile kunye newaranti eneminyaka engama-6 / 70,000-male powertrain.
QX50 (owayesakuba ngu-EX35)
I-Infiniti EX35 yaqala njengomzekelo we-2008. Ngo-2016, yaziwa njengeQX50 (i-$ 34,450) okanye i-QX50 AWD (i-$ 35,850). Ukhetho olukhethiweyo lwezikhetho ezikhethiweyo luvumela abathengi ukuba benze ngokwezifiso i-QX50 yabo. I-Pacum Package (i-$ 500) iphucula inkqubo yesandi, inkqubo yolawulo lwemozulu, kwaye idibanisa ezinye iindlela zokunethezeka. I-Premium Plus Package (i-$ 2,000) yongeza ukuHlola, ukuhanjiswa komsindo weBluetooth, i-NavTraffic, i-NavWeather kunye ne-monitor view. Iphakheji yokuKhenketha yeDeluxe (iibhola ezingama-2,400 zama-alloys angama-19 intshi, izibane zentloko ze-HID, izihlalo zokugcina izinto zamandla kunye nezinye iindlela.
Olunye u-$ 2,750 ufumana iPhakethe yeTeknoloji, ulawulo lwe-radar ukuhamba, ukuxwayisa indawo engaboniyo, isilumkiso sokuhamba kunye nokuthintela, kunye nokuncedwa kwe-bhakabhaka enesilumkiso kunye nesilumkiso sokubambisana, ukuzisa i-MSRP kwi-$ 44,495. I-QX50 yiyona nto ihambelana ne-Infiniti SUVs, egibele kwi-113.4 "wheelbase.
Ubungakanani bendawo yesithuthi ngu-186.8 "; ububanzi bubanzi bubungama-71.0"; ukuphakama ngu-62.7 "; kunye nokulinganisa u-3,855 lbs-4,020 lbs, kuxhomekeke kwizikhetho kunye nezixhobo.Imithwalo yemithwalo i-18.6 cubic feet emva komqolo wesibini.I-QX50 nganye inikwe i-injini engu-3.5-litre ye-V6 eyenzelwe ukuvelisa i-325 hp kunye I-267 lb-ft ye-torque, ifakwe kwi-7-speed speed transmission kunye ne-back wheel-drive okanye yonke i-wheel drive.
IXX60 (yangaphambili iJX35)
I-Infiniti JX35 yaqala ngohlobo lwe-2012 njengomlinganiselo ophakathi kwimizuzu emithathu, i-crossover emithathu yokuhamba ngevili. Ngo-2014, igama liguqulelwe kwiQX60. Ixabiso lesiseko se-QX60 li-$ 42,400. Yongeza i-$ 1,400 kwi-QX60 AWD (i-$ 43,800). I-QX60 ifumana ukhetho olukhethiweyo, ukusuka kwi-Premium (i-$ 1,550) ukuya kwi-Premium Plus (i-$ 3,000) ukuya kwi-Driver Assistance (i-$ 1,900) kwi-Theater Package (i-$ 1,700) kunye nokunye. I-QX60 ihamba nge-114.2 "ivilibase. Ubude obude bezithuthi ngu-196.4"; Ububanzi bubanzi 77.2 "; ukuphakama ngu-68.6"; kunye nokulinganisa umthamo ngu-4,385 - 4,524 lbs, kuxhomekeke kwizikhetho kunye nezixhobo. Umthamo wesigxina ngu-15.8 cubic feet emva komgca wesithathu. I-QX60 nganye inikwe amandla yi-injini ye-V6 ye-3.5-litre eyenzelwe ukuvelisa i-265 hp kunye ne-248 lb-ft yefowuni, inamathele kwi-automatic transmission variable (CVT).
Uqoqosho lwe-Fuel luqikelelwa kwi-21 mpg idolophu / 27 mpg nomgwaqo ohamba phambili kunye ne-19/26 kwi-wheel drive.
2015 Infiniti QX60 3.5 Uvavanyo lwe-AWD kunye noVavanyo.
Ngo-2013 Infiniti JX35 yoVavanyo lweDrive kunye noVavanyo.
2013 Infiniti JX35 Igalari yeSithombe.
IXX70 (eyayisakuba yiFX35, iFX45 kunye neFX50)
I-Infiniti QX70 ngoku isizukulwana sayo sesibini. Isizukulwana sokuqala (saziwa ngokuba yi-FX) sasiqala ngonyaka we-2003 ngo-2008; isizukulwana sangoku siqale ngo-2009, kwaye siye safumana ukuhlaziywa kwezonyango kwiminyaka ukususela. Ngo-2014, i-Infiniti yatshintsha iindibano zabo zokuqamba igama, kwaye i-FX yaba yi-QX70. I-cross-size crossover, i-FX ibelana ngesiteji kunye ne-back wheel-drive Nissan 370Z. Ngo-2016, iFX iyafumaneka kwiinkqubo ezimbini: i-QX70 (i-$ 45,850) kunye ne-QX70 AWD (i-$ 47,300). Iiphakheji ezine zezikhetho zikhoyo: Iiphakheji ze-Premium (i-$ 4,300) zizisa i-nav, i-traffic, imozulu, ukuhanjisa umsindo we-Bluetooth, i-monitor monitor kunye nezinye iimpawu.
Yongeza enye i-$ 3,300 kwiPhakheji yokuKhenketha i-Deluxe equka izihlalo eziphambili zeekhumba ezisezantsi kunye namavili angama-20; okanye udibanise i-$ 3,550 yeMidlalo yePakethi kwaye ufumane i-paddle shifters, 21 "iivili kunye nokukhanyisa kwangaphambili. I-Technology Package (i-$ 2,950) ingafakwa kwi-Premium ne-Deluxe Touring Packages. I-QX70 nge-Premium, i-Deluxe Touring kunye ne-teknoloji Iiphakheji ezikhethiweyo ziya kuqala kwi-$ 58,845, kunye ne-QX70 kunye nePakethi yeMidlalo, iPhakheji ye-Premium kunye nePakethe yeTeknoloji ingena kwi-$ 59,095. Iimpawu ze-QX70 zifumana u-3.5-litre V6 e-QX50, apha ulungele ukuvelisa i-325 hp kunye ne-267 lb-ft yefowuni ekhishwe kwi-7-speed speed transmission. I-QX70 ihamba ngevili; I-QX70 I-AWD iyonke idrayivu yevili. I-QX70 i-191.3 "ide kwaye igibele kwi-wheelbarase 113.6. Isithuthi si-75.9 "ububanzi kunye no-66.1" ububanzi, kwaye sinomlinganiselo kwi 4,209 - 4,321 lbs, kuxhomekeke kwizikhetho kunye nezixhobo. Iimitha eziyi-24.8 zeenyawo zomthwalo ziza kufakwa emva komgca wesibini, kwaye i-62.0 iiyure eziyi-cubic yeempahla zingaphakanyiswa ngoluhlu lwesibini oluhlanjwe. I-EPA iqikelela uqoqosho lwamafutha kwi-17 mpg yomzi / 24 mpg umgwaqo we-QX70 kunye no-16/22 nge-QX70 AWD.
2014 Infiniti QX70 Test Drive kunye noVavanyo.
2013 Infiniti FX50 Uvavanyo lwe-AWD Drive kunye noVavanyo.
QX80 (eyayisakuba yiQX56)
I-2016 Infiniti QX80 inxalenye yesityalo sesizukulwana sesithathu esilandelayo SUV. Isizukulwana sokuqala i-QX4 (1997 - 2003) yayiyi-size yobukhulu be-SUV esekelwe kwi-Nissan Pathfinder. Isizukulwana sesibini (2004 - 2010) saqanjwa ngokuthi yiQX56, kwaye sasisekelwe kwi-Nissan Armada epheleleyo, ukwabelana ngeqonga ngeloli ye-Nissan Titan.
Imoto yesithathu yesizukulwana esilandelayo yayisitsha-wonke ngo-2011, ayisasekelwe ngokuthe ngqo kumzekelo we-Nissan, kwaye yafumana ukuhlaziywa okuncinci ka-2012, kwaye igama liguquka kwi-QX80 ngo-2014. Iinguqu ezintathu ze-QX80 zithengiswa ngo-2016: I-QX80 2WD ( $ 63,250), i-QX80 4WD (i-$ 66,350) kunye ne-QX80 Limited (i-$ 88,850). Bonke bafumana i-V8 ye-5.6-litre evelisa i-hp 400 kunye ne-413 lb-ft yexhampu, ixhaswe kwi-7-speed speed transmission. I-QX yi-SUV epheleleyo ngokuqhelekileyo yendawo yokwakha, ekhwele kwi-121.1 "ivilibase. Ubude obupheleleyo ngu-208.9", ububanzi buyi-79.9 "kunye nokuphakama ngu-75.8". Isithuthi sinzima kuma-5,644 ukuya kuma-5,888 lbs, kuxhomekeke kwizixhobo kwaye zilinganiswe ukukhwela ukuya kuma-1,645 lbs kwaye ziyakhupha ukuya kuma-8 500 lbs. I-QX yangaphakathi ingaqwalaselwa ukuhlala kwisi-7 okanye i-8, kunye neenyawo eziyi-16.6 zeenyawo zomthwalo wemithwalo emva komqolo wesithathu. I-EPA iqikelela uqoqosho lwamafutha kwi-14 mpg yendlela / i-20 mpg umgwaqo we-QX80 kunye ne-QX80 AWD, kunye ne-13/19 ye-QX80 Limited.
Uvavanyo lwe-Infiniti QX56 noVavanyo .
Inkcazo yomthetho kaCharles
Uluhlu lweLizwi loLwimi lwesiLatini
UkuThunyelwa kweNkcubeko: Iimzekelo kwiLwimi